Tongasoa eto amin'ny "BEST FOREX EA'S | Mpanolo-tsain'ny mpitsoa-ponenana | FX ROBOTS " tranokala (BESTFOREXEAS) izay manome sehatra azo itokisana ho an'ireo mpampiasa hahitana ny toerana sy ny mpivarotra tonga lafatra mba hahatonga ny hetsika ho tsy hay hadinoina. Ny manaraka ny fitsipi-pifandraharaha manaraka dia mihatra rehefa mijery na mampiasa ny tranokala na ny serivisy amin'ny alalàn'ny https://www.bestforexeas.com
Miezaha hijery akaiky ireto teny manaraka ireto. Amin'ny fidirana na fampiasana ny sehatra na serivisy BESTFOREXEAS ianao dia manondro ny fifanarahana aminao amin'ny politika. Raha tsy manaiky ireo fepetra ireo ianao dia mety tsy afaka miditra amin'ny tranokalanay na mampiasa ny sehatra na serivisy BESTFOREXEAS.
Ity ny tsikera momba ny fiainana manokana momba ny BESTFOREXEAS. Ao anatin'io antontan-taratasy io, ny "izahay", "anay", na "anay" dia miresaka BESTFOREXEAS.
Isika no "BEST FOREX EA'S | Mpanolo-tsain'ny mpitsoa-ponenana | FX ROBOTS ", manao raharaham-barotra amin'ny BESTFOREXEAS.COM.
Ny birao misy anay dia ao amin'ny 9001 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90210, Etazonia.
Fampandrenesana ny fampahafantarana anao momba ny politika BESTFOREXEAS momba ny fampahalalana rehetra raketinay momba anao. Izy io dia mamaritra ny fepetra ahafahantsika manova ny vaovao izay angonintsika avy aminao, na omenao anay. Izy io dia mirakitra fanazavana izay mety hahafantaranao anao ("ny mombamomba anao manokana") sy ny fampahalalana izay tsy afaka. Ao anatin'ity lalàna ity sy ity fampatsiahivana ity, ny "fizahana" dia midika hoe fanangonana, fivarotana, famindrana, fampiasana na fanatanterahana zavatra hafa.
BESTFOREXEAS dia manenina fa raha misy iray na maromaro etsy ambany izay tsy faly anao, ny hany azonao atao dia ny mamela ny tranokalantsika avy hatrany.
BESTFOREXEAS dia miaro ny fiarovana ny fiainanao manokana sy ny tsiambaratelo. Ny BESTFOREXEAS dia mahatakatra fa ny mpitsidika rehetra ao amin'ny vohikalantsika dia manan-kery hahafantarana fa ny fampiasana azy manokana dia tsy ampiasaina amin'ny tanjon'izy ireo, ary tsy ho tafiditra ao an-tànan'ny antoko fahatelo.
BESTFOREXEAS dia mikendry ny hitazona ny tsiambaratelo ny fampahalalana rehetra omenao anay, ary manantena fa hiverina ianareo.
Ny politikantsika dia mifanaraka amin'ny lalàna amerikana, ary ny lalàna UK dia mifanaraka amin'izany, anisan'izany ny fangatahan'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana (GDP).
Ny lalàna dia mitaky antsika hiteny aminareo momba ny zonao sy ny adidinay aminao mikasika ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny angona manokana. Bestforexeas izao manao izao, amin'ny fangatahana ny hamaky ny vaovao omena ao http://www.knowyourprivacyrights.org
NY FAHALALANA AO AMINAREO MOMBA NY FAMPIANARANA IZANY
Ny lalàna dia mitaky antsika hamaritra izay ahafahana mametraka fototra enina voafaritra izay sokajintsika sokajy samihafa momba ny mombamomba anao manokana, ary hampahafantatra anao ny fototry ny sokajy tsirairay.
Raha toa ka tsy manan-kery intsony ny fotokevitra izay ahafahantsika manova ny mombamomba ny tenanao, dia hajanontsika haingana ny angon-drakitrao.
Raha miova ny fototra, raha ilaina ny lalàna BESTFOREXEAS dia mampahafantatra anao ny fanovana sy ny fototra rehetra izay efa nanapa-kevitra izahay fa afaka manohy ny fampahalalana ny vaovao.
TAKELAKA MOMBA NY MIRALENTA EO AMINAREO AO ANATINAO OLON'I KRISTY
Rehefa mamorona kaonty ao amin'ny tranokalan'ny BESTFOREXEAS ianao, mividiana vokatra na serivisy avy aminay, na manaiky ny fepetra sy fepetra mifanaraka aminay, dia misy fifanekena eo aminareo sy ny anay.
Mba hanatanterahana ny adidinay amin'ny fifanarahana dia tsy maintsy mandamina ny vaovao omenao izahay. Ny sasany amin'ireo fampahalalana ireo dia mety ho fampahalalana manokana.
Azontsika ampiasaina izany mba:
Hamarino ny mombamomba anao amin'ny sehatra fiarovana
Amidio ny vokatra ho anao
Hanome anao ny asa ataonareo
Manomeza soso-kevitra sy toro-hevitra momba ny vokatra, ny tolotra ary ny fomba hahazoana ny ankamaroan'ny fampiasana ny tranokalanay
Ny BESTFOREXEAS dia mametraka izany fampahalalana amin'ny fotony izany dia misy fifanarahana eo amintsika, na nangatahinao ny fampiasanay ny vaovao alohan'ny hidiranay amin'ny fifanarahana ara-dalàna.
Ankoatra izany, mety hampifandraisinay amin'ny ankapobeny io fampahalalana io amin'ny ankapobeny ary ampiasao izany mba hanome fampahalalana momba ny kilasy, ohatra ny hanaraha-maso ny zava-bitanay momba ny asa fanompoana manokana iray. Raha mampiasa azy io ho an'ity tanjona ity ianao, dia tsy ho fantatrao manokana ianao.
Ny BESTFOREXEAS dia hanohy handinika izany fampandrenesana izany mandra-piafaran'ny fifanarahana eo amintsika na amin'ny alalan'ny fe-potoana roa amin'ny fifanarahana.
FAMPIANARANA MOMBA NY MIRESAKA ANAO
Amin'ny alalan'ny hetsika sasany raha tsy izany dia tsy misy fifandraisana misy eo amintsika, toy ny rehefa mijery ny tranokalantsika na mangataka antsika hanome vaovao misimisy kokoa momba ny raharaham-barotra, anisan'izany ny fivarotana varotra sy ny vokatra sy ny serivisy, dia manome alalana anao izahay handinika ny vaovao Mety ho fampahalalana manokana izany.
Raha azo atao dia tadiavinay ny fanekenareo mazava tsara handraisana ity vaovao ity, ohatra, amin'ny fangatahana anao hanaiky ny fampiasanay cookies.
Indraindray ianao afaka manome ny fanekena anao amin'ny fomba mazava, toy ny rehefa mandefa hafatra amin'ny alàlan'ny mailaka izay mety hanampo anay hamaly.
Ankoatra izay efa nanaiky ny fampiasana ny fampahalalanao ho an'ny tanjona iray manokana, tsy mampiasa ny fampahalalànao amin'ny fomba izay mety hamaritra anao manokana ianao. Azontsika atao ny mametraka izany amin'ny ankapobeny ary mampiasa azy io mba hanome fampahalalana momba ny fotoam-pianarana, ohatra hanaraha-maso ny fahatanterahan'ny pejy manokana ao amin'ny tranokalantsika.
Raha omena fahazoan-dàlana mazava izahay hanao izany, dia mety handany ny anaranao sy ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa voafantina izahay indraindray, ka afaka manome tolotra na vokatra mety ho hitanao.
Ny BESTFOREXEAS dia manohy manova ny fampahalalana momba io fototra io mandra-pialanao ny fanekenao na azo ekena fa tsy misy intsony ny fanekenao.
Azonao atao ny manala ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny fanoroan-anay amin'ny mailaka [mailaka voaaro]. Na izany aza, raha manao izany ianao, mety tsy ho afaka hampiasa ny tranokalantsika na ny serivisianareo bebe kokoa.
FAMPIANARANA MAMPIARAKA AMIN'NY FANAZAVANA FANAMPINY
Ny BESTFOREXEAS dia afaka manamboatra vaovao amin'ny fototra dia misy tombontsoa ara-drariny, na ho anao na ho antsika, amin'ny fanaovana izany.
Aiza no ahafahantsika mandinika ny fampahalalam-baovao momba izany, isika dia aorian'ny fandinihana amim-pitandremana:
raha azo atao amin'ny fomba hafa ny tanjona mitovy amin'izany
na ny fanodinana (na ny fanodinana) dia mety hanimba anao
na hanantena anao izahay handinika ny angon-drakitrao, ary raha tianao, amin'ny andaniny dia eritrereto tsara ny hanaovana izany
Ohatra, azonay atao ny mametraka ny angon-drakitra eto amin'ity fototra ity ho an'ny tanjona:
fitazonana ny fitazonana ny fitantanana araka ny tokony ho izy sy ny ilàna ny orinasantsika
Mamaly ny fifandraisana tsy misy fanontanianao avy aminao izay inoantsika fa mety hiandry valiny
miaro sy manohana ny zo ara-dalàna misy ny antoko
manohana na mahazo toro-hevitra matihanina izay takiana amin'ny fitantanana ny loza mety hitranga
miaro ny tombontsoanao izay inoanay fa manana adidy izahay hanao izany
FANAZAVANA ANTOKA MOMBA NY FAMONJENA ANTSIKA
BESTFOREXEAS dia manaiky ny lalàna tahaka ny olon-drehetra. Indraindray, tsy maintsy mandamina ny fampahalalana ianareo mba hanatanterahana ny adidy amam-pitsipika.
Ohatra, mety takiana amintsika ny hanome vaovao amin'ny manampahefana ara-dalàna raha toa ka mangataka izany izy ireo na manana ny fanomezandàlana araka ny tokony ho izy toy ny taratasy fanamarinana na didim-pitsarana.
Mety hahitana ny mombamomba anao manokana izany.
Fampiasana manokana momba ny vaovao omenao anay
MAHASOA NY FAMPANDROSOANA AZO ANTOKA HO ANTSIKA
Ny vohikala dia ahafahanao mandefa vaovao miaraka amin'ny fijerena ireo vaovao izay vakiana, kopia, entana, na ampiasain'ny olon-kafa.
Tsindrio eo amin'ny sary eo akaikin'ny hafatry ny mpitsidika iray hafa mba hampita ny fifanarahana, ny tsy fifanarahana na ny fisaorana
Amin'ny famoahana ny mombamomba anao manokana, dia mahafa-po anao ny mahafa-po ny mombamomba ny olon-tsotra izay mety hampiasa izany.
TSY MISY MAMPIASA NY FAMPIHARANA ITY IZAY TSY MANAIKY AZY IREO TOKONY HATAONTSIKA.
Manangona izany izahay, ary miaro ny zo hampiasa izany amin'ny hoavy amin'ny fomba fanapahan-kevitrao.
Raha vao tafiditra ao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ny fampahalalana anao dia tsy manana fanaraha-maso izay mety ataon'ny olon-kafa fahatarana. Tsy manaiky ny andraikiny amin'ny fotoana rehetra isika.
Arakaraka ny fangatahanao dia azo ekena ary tsy misy fototra ara-dalàna mba hitazonana izany, dia azontsika atao ny manaiky ny fangatahanao hanafoana ny mombamomba anao manokana. Afaka manao fangatahana ianao amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny mailaka.
FANONTANIANA FAMPIANARANA AMIN'NY WEBITE WEBITE
Manandrana manitsy ny votoaty entin'ny mpampiasa izahay, saingy tsy afaka manao izany isika raha vantany vao nivoaka ilay votoaty.
Raha mitaraina momba ny votoaty ao amin'ny vohikalantsika isika dia hanadihady ny fitarainanao.
Raha mahatsapa isika fa azo hamarinina na raha mino isika fa ny lalàna dia mitaky antsika hanao izany, dia hanaisotra ny votoaty isika rehefa manadihady.
Ny fahalalahana miteny dia zo fototra, noho izany dia tsy maintsy mamoaka didim-pitsarana mikasika izay mety hanohintohina ny zony: ny anao na ny an'ny olona izay nandefa ny votoaty manafintohina anao.
Raha heverintsika fa mitebiteby na tsy misy fototra ny fitarainanao dia tsy hifanaraka aminareo izahay.
FOMBA AZO ANTOKA HO ANTSIKA
Ny fangatahana fandoavam-bola dia tsy nalain'ny anay na oviana na oviana na oviana na oviana amin'ny alalan'ny tranokalanay na raha tsy izany. Ny mpiasa sy ny mpandraharaha dia tsy mahazo miditra amin'izany.
Raha ny fandoavam-bola, dia nafindra tamina pejy azo antoka ao amin'ny tranonkalan'ny World Pay / Sage Pay / PayPal / Moneybookers / Stripe na mpandraharaha hafa mpamatsy vola hafa. Azonao atao ny manamarika io pejy io ho toy ny pejy ao amin'ny tranonkalanay, saingy tsy voafehin'ny antsika izany.
MANDRAISA ANARANA HO ANTSIKA
Rehefa mifandray aminay ianao, na amin'ny finday, amin'ny tranokalanay na amin'ny alàlan'ny mailaka, dia angoninay ny angona nomenao anay mba hamaliana ireo fampahalalana ilainao.
Manoratra ny fangatahanao sy ny valinteninay izahay mba hampitomboana ny fahombiazan'ny orinasanay.
Isika dia mitazona ny mombamomba ny olona manokana mifandraika amin'ny hafatrao, toy ny anarana sy adiresy mailaka, mba hahafahanao manara-maso ny fifandraisanao amin'ny serivisy mba hanomezana tolotra faran'izay tsara.
Rehefa mahazo fitarainana isika dia manoratra ny vaovao rehetra nomenao anay.
Mampiasa izany fanazavana izany izahay mba hamahana ny fitarainanao.
Raha ny fangatahanao dia mitaky amintsika mba hifaneraserantsika amin'ny olon-kafa, dia mety hanapa-kevitra ny hanome ilay olona hafa ny sasany amin'ireo fampahalalam-baovao voarakitra ao amin'ny fitarainanao. Ataontsika araka izay tratrantsika izany, saingy resaka iray ihany ny fahendrentsika manokana raha manome fanazavana isika, ary raha manao izany isika, dia inona izany fanazavana izany.
Azontsika atao ihany koa ny manangona antontan'isa maneho ny vaovao azo avy amin'ity loharano ity mba hanombanana ny lamin'ny asa fanompoana omena antsika, fa tsy amin'ny fomba izay mety hamantarana anao na olona hafa.
Ity no vaovao nomenay anao amin'ny maha-mpiara-miasa aminay na amin'ny maha-mpiara-miasa aminareo.
Izany dia mamela antsika hamantatra ireo mpitsidika izay niresaka taminao, ary hanome alalana anao hanao asa fitakiana noho izany fakana an-tsoratra izany. Anisan'izany ny fampahalalana izay mamela antsika handefa iraka ho anao.
Ny fampahalalana dia tsy ampiasaina amin'ny tanjona hafa.
Manao ezaka izahay mba hiarovana ny tsiambaratelo momba ny vaovao sy ny fepetran'ny fifandraisanay.
Ny BESTFOREXEAS dia manantena fa ny mpiara-miasa na ny mpiara-miasa dia manaiky hanaiky ity fitsipika ity.
Cookies dia rakitra an-tsoratra madinika izay napetraka amin'ny fiara sarotra amin'ny alàlan'ny tranonkalanao rehefa mitsidika tranokala. Izy ireo dia mamela ny vaovao nangonina ao amin'ny tranonkala iray mba ho voatahiry mandra-pahatongan'ny fampiasana azy amin'ny iray hafa, mamela ny tranokala hanome anao traikefa manokana sy ny tompon'ny tranonkala miaraka amin'ny antontan'isa momba ny fomba ampiasanao ny tranonkala mba hahafahana manatsara azy.
Mampiasa cookies ny tranonkalanay. Izy ireo dia napetraka avy amin'ny rindrambaiko izay miasa eo amin'ny servery, ary amin'ny alalan'ny rindrambaiko no ampiasain'ireo antoko fahatelo izay ampiasain'ny serivisy ampiasaintsika.
IDENTIFIERS MITOVY MALAGASY
Ny fangatahana amin'ny tranonkalanao amin'ny tranonkalanay ho an'ny tranonkala sy ny votoaty hafa ao amin'ny vohikalanay dia voarakitra.
Manangona vaovao tahaka ny toerana misy anao ianao, ny mpampiasa anao amin'ny Internet ary ny adiresy IP anao. Manoratra ihany koa izahay momba ny rindrambaiko ampiasainao mba hijerena ny tranokalanay, toy ny karazana solosaina na fitaovana ary ny solonanarana.
Mampiasa an'io fampahalalam-baovao io izahay mba hanombantombanana ny lazan'ny tranonkala ao amin'ny tranokalanay ary ny fomba hanatanterahanareo izany.
Raha ampifandraisina amin'ny fampahalalana hafa fantatray momba anao amin'ny fitsidihana teo aloha, dia azo ampiasaina ny angon-drakitra mba hamantarana anao manokana, na dia tsy voasoratra ao amin'ny tranonkalanay aza.
Ny fampiasana ny famerenana
Ny fiverenana indray dia ny fametrahana cookie eo amin'ny solosainao rehefa mijery ny tranonkalanay ianao mba hahafahanao manolotra dokambarotra ho an'ny vokatra na ny serivisy rehefa mitsidika tranokala hafa ianao.
Azontsika atao ny mampiasa antoko fahatelo mba hanomezany antsika ny fivarotana indray mandeha isan'andro. Raha izany no izy, raha manaiky ny fampiasana cookies ianao, dia mety hahita dokam-barotra ho an'ny vokatra sy ny serivisy ao amin'ny tranokala hafa.
Famaritana sy famaritana ny fampahafantaranao
Fampahalalana azontsika avy amin'ny antoko fahatelo
Na dia tsy manambara ny mombamomba anao manokana ho an'ny antoko fahatelo aza izahay (afa-tsy ny voalaza ato amin'ity taratasy ity), indraindray izahay dia mandray ireo angona izay tsy mifanaraka amin'ny fampahalalanao manokana avy amin'ny antoko fahatany izay ampiasain'ny tolotra ataonay.
Tsy misy ny fampahalalana toy izany dia azo fantarina manokana aminao.
Ny BESTFOREXEAS dia tsy manana fanaraha-maso ireo teknolojia ireo na ny angon-drakitra takian'ireo antoko ireo. Noho izany, ity tsiambaratelo momba ny fiainana ity dia tsy manazava ny fomba fampahafantarana an'ireny antoko fahatelo ireny.
AZO ANTOKA DATY AFAKA IREO FIANGONANA EUROPEANINA
Ny tranonkalanay dia atolotra any Etazonia.
Azontsika atao ihany koa ny mampiasa tolotra mivantana any amin'ireo firenena ivelan'ny Vondrona Eorôpea indraindray amin'ny lafiny hafa amin'ny orinasantsika.
Araka izany dia azo aroso any ivelan'ny Vondrona Eoropeana ireo angona azo avy amin'ny US, UK na firenena hafa.
Ohatra, ny sasantsasany amin'ireo rindrambaiko ampiasain'ny tranonkalantsika dia mety efa novolavola tany Etazonia na tany Aostralia.
MAHARESAKA NY FAMPIANARANA AN-TANY
Fidio ny mombamomba anao manokana:
Amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny mamerina mamoaka na mamelabelatra ny fampahalalana manokana azo tsidihina momba anao, amin'ny alalan'ny sonia ao amin'ny kaontinao ao amin'ny tranokalanay.
Mba hahazoana dika amin'ny fampahalalana rehetra izay tsy omena ao amin'ny tranokalanay dia mety mandefa anay fangatahana mailaka izahay.
Aorian'ny fandraisana ny fangatahana, dia hiteny aminareo izahay rehefa manantena ny hanome anao ny fampahalalana, ary raha toa ka mitaky lamandy izahay mba hanomezana izany anareo.
FANDRAISANA NY INFORMATION
Raha tianao ny hanala ireo fampahalalana manokana azo fantarina avy amin'ny tranokalantsika, dia afaka mandefa anay amin'ny alàlan'ny mailaka izahay.
Mety hametra ny fanompoana azontsika omena anao izany.
FIFANDRAISANA AMIN'NY FAMPIANARANA
Rehefa mahazo fangatahana hidirana, manitsy na mamafa ny mombamomba ny mombamomba ny tsirairay isika dia handray fepetra hentitra mba hanamarinana ny mombamomba anao alohan'ny hanomezana anao ny fidirana na fanatanterahana zavatra hafa. Zava-dehibe ny fiarovana ny mombamomba anao.
FAMPIANARANA AVY AMIN'NY ZAZA
Ny BESTFOREXEAS dia tsy mivarotra ny vokatra na manome asa ho an'ny ankizy mividy, ary tsy hivarotra ho an'ny ankizy.
Raha eo ambany 18 ianao, dia azonao atao ihany ny mampiasa ny tranokalantsika amin'ny alàlan'ny faneken'ny ray aman-dreny na ny mpiambina.
MISY ANTSIKA ATSIMO
Ny tranonkala BESTFOREXEAS dia mampiasa ny mari-pamantarana SSL (certificates Secure Sockets Layer) mba hanamarina ny maha-identity anao amin'ny tranokalanao ary hampiakatra ny angona izay omenao anay.
Na oviana na oviana ny fampahalalam-baovao dia ampitaina amintsika, dia azonao atao ny manamarina fa vita amin'ny SSL amin'ny alalan'ny fikatsahana ny marika famantarana ny fametahana kitapo na ny marika hafa azo itokisana ao amin'ny bar of your browser's or toolbar.
Raha tsy faly amin'ny politika manokana ianao na raha misy fitarainana dia azonao atao ny mandefa mailaka.
Raha toa ka tsy voavaha ny fifandirana dia manantena izahay fa hanaiky ny hanandrana hamaha izany amin'ny alàlan'ny fananana finoana matoky antsika amin'ny alàlan'ny fanelanelanana na fitsaràna.
Raha toa ka tsy afa-po amin'ny fomba fampiharana ny mombamomba anao manokana ianao, dia manana zo hitory fitarainana amin'ny Biraon'ny Komisiona momba ny Fampahalalam-baovao ianao.
MAHARESAKA MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'NY PERSONY
Ankoatra izay tsy voalaza ao anatin'ity fampatsiahivana momba ny fiainana manokana ity, dia mitazona ny angon-drakitrao manokana izahay mandritra ny fotoana rehetra ilainay:
Hanolotra anao amin'ireo serivisy nangatahinao;
Manaraka ny lalàna hafa, anisan'izany ny fe-potoana takian'ny manampahefana momba ny hetra;
Hanohana fanambarana na fiarovana any amin'ny fitsarana.
FANOMPOANA NY LALANA
Ny politikantsika manokana momba ny tsiambaratelo dia napetraka mba hanarahana ny lalànan'ny firenena tsirairay na ny juridiction araka ny lalàna izay tanjontsika hanao raharaham-barotra. Raha mihevitra ianao fa tsy mahafa-po ny lalànan'ny faritra misy anao, dia tianay ny hihaino anao.
Na izany aza, amin'ny farany dia safidinao raha tianao ny hampiasa ny tranokala BESTFOREXEAS.
FAMPANDROSOANA / FIFANDRAISANA AMIN'NY FITANTANANA ITY
Ny BESTFOREXEAS dia mety hampandre ity fampahafantarana momba ny tsiambaratelo ity mandritra ny fotoana fohy raha ilaina. Ny teny izay mihatra aminao dia ireo navoaka tao amin'ny tranokalanay tamin'ny andro nampiasanao ny tranokalanay. Manoro hevitra anao izahay mba hanonta dika mitovy amin'ny rakitsoratrao.
Raha manana fanontanina momba ny politikan'ny fiainanao manokana ianao dia manontania tena.